Vavolombelon’i Jehovah Atsy Afrika
MPONINA 994 839 242
MPITORY 1 421 375
FAMPIANARANA BAIBOLY 3 516 524
Narahin-dry zareo ilay ramose
Mpisava lalana i José, izay mipetraka any Luanda, any Angola. Mbola tanora izy ary mampianatra ao amin’ny sekoly iray eo akaikin’ny Efitrano Fanjakana. Tsara toetra sy mahay mampianatra izy, ka tia sy manaja azy daholo ireo mpianany 86. Manomboka amin’ny 4.00 tolakandro ny fivorian’ny fiangonany rehefa andavanandro, ka mahazo alalana hirava aloha izy amin’io andro io. Tonga dia mamantana any amin’ny Efitrano Fanjakana izy rehefa mirava.
Lasa saina ny mpianatra sasany hoe maninona i José no mirava aloha ary mankaiza. Nanaraka azy àry ny mpianatra roa, indray andro, ary nanatrika fivoriana. Dimy indray no tonga nivory, taoriana kelin’izay. Nanana anjara tamin’ny Fivoriana Momba ny Fanompoana i José tamin’io. Vetivety dia fantatry ny iray kilasy izany. Nitombo foana àry ny mpianatra tonga nivory, ary nisy fotoana aza nahatratra 21. Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy no nitrangan’izany. Nanasa azy rehetra hianatra Baiboly ny mpitory tao amin’ilay Efitrano Fanjakana, ka nanaiky ny ankamaroany. Lasa liana ny mpianatra hafa rehefa nahita an’ireo boky nentin’ny namany tany am-pianarana, ka mba nandeha nivory koa. Nisy 54 ny mpianany nivory tamin’iny taom-pianarana iny. Nilaza i José fa ny 23 amin’ireo izao no mandroso tsara sy mivory foana.
Tsy ampy, hono, ny faritany
Nizeria: Joseph sy Evezi, mampiasa fitaovana fandefasana DVD eny amin’ny fanompoana
Mpisava lalana manokana any Nizeria i Joseph sy Evezi, ary vao avy nahazo fanendrena vaovao. Nony tonga tany izy ireo, dia maro ny mpitory nitaraina hoe “efa masaka ny faritany, ka tsy ampy intsony.” Nanoratra tany amin’ny sampana anefa i Joseph, herintaona tatỳ aoriana, hoe: “Miasa amin’ny faritaninay foana izahay isan’andro. Lasa tsy mitsaratsara na mankahala anay intsony anefa ny olona. Mitondra fitaovana fandefasana DVD entin-tanana mantsy izahay isaky ny mitory, ka mampiseho video amin’ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe. Manana mpianatra Baiboly 18 izao izahay mivady, ary indraindray aza tsy arakay intsony ilay izy. Asain’ny ankizy mampiseho an’ilay video misy an’i Kaleba foana koa izahay.”
Nangataka fanampiana izy ireo
Congo (Kinshasa): Mitory amin’ny mpanarato
Nahazo taratasy mampahery ny biraon’ny sampan’i Congo (Kinshasa), tamin’ny Aprily 2014. Mpanarato avy ao amin’ny Nosy Ibinja, any amin’ny Farihin’i Kivu, no nanoratra an’ilay izy. Matetika ireo mpanarato ireo no mandeha mivarotra any amin’ireo tanàna manodidina. Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy ireo, indray andro, rehefa nankany Bukavu. Nandre ny vaovao tsara izy ireo, ary nahazo Baiboly iray sy gazety vitsivitsy.
Tena tian’ireo mpanarato ny zavatra novakiny ary noresahiny tamin’ny hafa. Be dia be ny olona liana, ka nasain’ireo mpanarato niverina tany Bukavu ny iray tamin’izy ireo mba hitady Vavolombelona sy hitondra azy any Ibinja. Tsy nahita anefa izy io, ka nanoratra tany amin’ny biraon’ny sampana, hoe: “Mba andefaso Vavolombelona izahay hanampy anay. Te hahay Baiboly koa mantsy izahay sady te hiaina mandrakizay. Vonona hampiantrano azy ireo izahay. Homeko koa ny taniko mba hanamboarana fiangonana. Hitanay avy tamin’ireo andinin-teny tao amin’ny bokinareo fa mampiana-diso fotsiny ny mompera sy ny pasitera. Miaiky izahay hoe ny anareo no fivavahana marina. Betsaka ny olona te hianatra Baiboly sy te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah eto Ibinja.”
Nilaza ilay taratasy fa nisy 40 teo ho eo ny olona liana tao amin’ilay nosy. Misy mponina 18 000 mahery ao Ibinja, nefa tsy misy Vavolombelona na iray aza. Tonga dia nalefan’ny biraon’ny sampana tany ny mpisava lalana manokana roa, izay mahay tsara ny fiteny any.
Manaiky hihaino izao ilay pasitera
“Hanatrika Fahatsiarovana foana aho izao.” Pasiteran’ny fiangonana protestanta iray fanta-daza atsy Afrika Atsimo no niteny an’io. Nanatrika Fahatsiarovana mantsy izy tamin’ny Aprily 2014. Fa nahoana? Indray andro, nisy rahalahy roa nandondòna tao aminy mba hitory, ka ny iray mainty hoditra ary ny iray fotsy hoditra. Efa fantatr’izy ireo hoe tsy mandray Vavolombelona mihitsy io pasitera io. Hoy i Adaine: “Gaga be izahay fa nosokafany ny varavarana ary nampandrosoiny izahay. Naharitraritra ihany ny resakay. Gaga izy nahita lehilahy fotsy hoditra mitory any amin’ny tanànan’ny mainty hoditra, sady amin’izay miresaka aminy amin’ny fiteniny. Lasa nianatra Baiboly tsy tapaka ilay pasitera.”
Hoy ihany i Adaine: “Efa 40 taona mahery io rangahy io no misionera sady pasitera. Amin’izao izy 80 taona izao anefa vao voavaly daholo ny fanontaniany. Tena tiany ilay boky hoe Tahafo ny Finoan’izy Ireo. Rehefa mianatra izahay, dia mitadidy hevitra vitsivitsy izy, ary iny no ampiasainy amin’ny toriteniny. Nasehony an’ireo mpiangona koa ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, sady hoy izy: ‘Rehefa misy Vavolombelon’i Jehovah tonga any aminareo ka mitondra an’ity boky ity, dia raiso tsara izy ary henoy izay lazainy. Ahalalanareo zavatra be dia be momba an’Andriamanitra izy ity.’ ”
Nilaza tamin’i Adaine ilay pasitera fa bedin’ny lehibeny izy, ka tsy hitany izay hatao. Nampitandreman’izy ireo, hono, izy mba tsy hiresadresaka momba ny Vavolombelon’i Jehovah intsony rehefa mitory teny. Tadidin’i Adaine ilay tantarana mpitory teny tany Myanmar, voaresaka ao amin’ny Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2013. Novakin’i Adaine taminy ilay tantara, ka hoy izy: “Mitovy amiko mihitsy io! Hitako amin’izay izao ny hataoko ary tena tsy hangataka andro aho.”
Tamin’ny 14 Aprily 2014 ilay pasitera no nanatrika Fahatsiarovana voalohany, ary nilaza fa hanatrika foana. Nilaza koa izy fa efa tapa-kevitra ny hiala tanteraka any amin’ny fivavahan-diso.
Fitoriana tany amin’ny toerana fambolena kakaô
Ghana: Baffour sy Aaron, mitory eny amin’ny toerana fambolena kakaô
Mpisava lalana manokana any Bokabo, any amin’ny faritra andrefan’i Ghana, i Baffour sy Aaron. Toerana fambolena kakaô izy io. Mifanalavitra be ny faritaniny, ary feno tranokely mitsitokantokana. Lalan-kely misampantsampana mamakivaky tanimboly no ahatongavana any amin’ireny trano ireny ka mora mahavery. Indray andro izy roa lahy nandeha lalan-kafa mbola tsy falehany, ka tonga tany amin’ny tranokely mbola tsy notsidihiny mihitsy. Nahita an’i Michael sy Patience izy ireo tao. Nanaiky hianatra Baiboly izy mivady. Hoy i Michael: “Efa roa taona izao izahay no tsy niangona intsony, satria tsy mifanaraka amin’ny fampianaran’ny Baiboly ny zavatra hitanay tany. Naleonay nianatra Baiboly samirery tato, isan-kariva, ary nitady ny valin’ny fanontanianay. Nivavaka foana koa izahay mba hahita ny fahamarinana.” Tonga dia nandeha nivory izy ireo, na dia tsy maintsy nandeha lavitra sy namakivaky tanimboly maro aza. Natao batisa izy mivady tamin’ny herintaona, ary efa mpisava lalana maharitra. Mandeha amin’ireo lalan-kely koa izao izy ireo ary mamakivaky toerana fambolena kakaô, mba hitady an’ireo olona efa ‘nivavaka foana mba hahita ny fahamarinana.’
Michael sy Patience, mamakivaky tanimboly